Gunnada qaxootiga oo 20 sannadood aan wax laga bedelin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gunnada qaxootiga oo 20 sannadood aan wax laga bedelin
Cali: Nolol wanaagsan iima muuqato
La daabacay torsdag 27 november 2014 kl 18.00
20 sannadood ayaan kor loo qaadin gunnada la siiyo soo galootiga oo gaarsiisan 71 koron maalintii. Halka cidda sharciga loo diidey ay gunnadaasi hoos loo dhigo. Waana gunno gaarsii-san 40 koron maalintii, middaasina loogu talo galey iney kifaaleeyso nolosha oo dhan. Cali wuxuu dalka ku sugnaa saddex sannadood. Wuxuuna qaataa 1200 bishii. Iyada oo dhawaan uu diidmo ka helay codsi uu wakaaladda socdaalka kaga codsaday 200 oo uu dhar qaboobe ku iibsado:
Dhaqaalaha la siiyo soo galootiga iyo midka ey qaataan dadyoowga dadlabkoodii magan-gelyo mayada ku heley ayaa ka hooseeya midka dadyoowga ey degmooyinku masruufaan waxa soomaalidu u taqaanno ceeydha oo gaarsii-san 100 koron maalintii.
Dhowaantahn ayuu Cali maadaama aan dalkiisii dib loogu celin karin uu dhowaantan ka codsaday wakaaladda socdaalka dhaqaale aan sidaa u badneeyn oo uu ku gato dharka qaboobaha, Hase yeeshee ay hayadda socdaalku diidmo ka siisay. Middaasina oo lagu macneeyey in saddex sannadood hortood, kolkii uu dalka soo caga-dhigtay hayadda ka qaatay lacag gaarsii-san 400 oo koronka iswiidhishka oo loogu talo galey jaakad, surwaalka, kabaha, gacma-gashiga, iyo iskaafka qaboobaha:
Wakaalaadda socdaalka ayaa qiyaastii shan daloolow mid diidmo ka siisa soo-galootiga dhaqaalaha dheeriga ah ee loogu talo-galey dharka qaboobaha. Iyadoona ay hayaddu sheegtay inay tahay in laga dhigto lacagta 40-ka koron ee maalintii la qaato:
– Waxaa laga yaabaa in sannadkii tagay la isku siiyey taageero dheeri ah ee dharka dhaxanta. Waxaanan u qiyaasnaa in qofka qaan-gaarka ahi uu isticmaali karo dharkii qaboobaha ee uu istcmaaley qaboobihii hore. Sidoo kale waxaa jirta in haddii uu shakhsigu dhowr sannadood dalka ku sugnaa inuu ka dhigan karo gunno-maalmeedka la siiyo. Waa afartanka koron ee uu cali qaato, sida uu sheegay Mats Johansson, ahna madaxa laanta qaabilaadda soo-galootiga ee nawaaxiga Norrköping.
Diidmada haddaba Cali kala soo gudboonaatay hayadda socdaalka ee dalabkiisii inuu helo lacag aan sidaa u badneyn oo uu dhar qaboobe ku iibsado ayuu sarkaalka hayadda socdaalka Mats Johansson ku macneeyay inay tahay dhabba-tus u yaala wakaaladda iyo in 40-ka koron ee uu Cali qaato laga dhigto miisaaniyad lagu gato dharka dhaxanta:
– Dhabba-tuska howl-wadeennada hayadda u yaala wuxuu yahay in haddiiba uu ruuxu dhowr sannadood dalka ku sugnaa uu dalabkiisa taageero ee dhaqaale lagu iibsado dharka qaboobaha ay maya noqoto, sida uu sheegay Mats Johansson. Isagoona intaa raaciyay:
– Go’aanka gunnadan waxaa la gaarey sannadkii 1994. Hayadda socdaalkuna waxay muddo iminka sanooyin laga joogo qoraal u gudbisay dawladdii waagaa iyadoona hayaddu u soo jeedisay dawladda in gunnadaa kor loo qaado, hase yeeshee aan dheg loo raaricin fikirkii hayadda.
Nolosha Cali ee xilliga qaboobaha ayaa hadaba noqota mid wax badani iska bedelaan uuna inta badan guri ku xabisnaado, sida uu sheegay Cali:
Isha /P4 Östergötland